Ciidamada AMISOM oo howlgalo lagu sugayo Amniga ka bilaabay Baladweyne - Muqdisho Online
Home Wararka Ciidamada AMISOM oo howlgalo lagu sugayo Amniga ka bilaabay Baladweyne
Ciidamada AMISOM oo howlgalo lagu sugayo Amniga ka bilaabay Baladweyne
Wararkii ka imaanaya magaalada Baledweyne ayaa sheegaya in lagu arkayo magaalada dhaqdhaaqa Ciidamada AMISOM ugu dambeeyey ee ka imaanayo Magaalada.
Ciidamadaas ay soo farageliyay xiisadda ka taagan Magaalada Baladweyne.
Ciidamada Jabuuti ee ka tirsan AMISOM ayaa la wareegay amaanka Xafiisyada Maamulka Gobolka Hiiraan oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen Ciidamo ka amar qaata Gudoomiyahii xilka laga qaaday Yuusuf axmed Hagar Dabageed kaasoo diiday inuu xilka wareejiyo.
Albaabka hore ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa lagu arkayaa Ciidamada Jabuuti oo wata gaadiidka dagaalka.
Wali waxaa Magaalada Baledweyne ka jirta Xiisadii ka dhalatay xil ka qaadidii uu Madaxweynaha Hirshabelle ku sameeyay Gudoomiyahii hore gobolka hiiraan Yuusuf
Sidoo kale waxaa uu ugu baaqay odayaasha iyo waxgaradka Gobolka Hiiraan inay ka qeyb qaataan howlaha nabadeynta iyo waxyaabaha ka hor imaanaya hanaanka dowliga ah.
Previous articleNin ajnabi ah oo lagu toogtay magaalada Addis Ababa
Next articleC/rashiid Xidig oo lagu eedeeyay in uu lacag ku qaybinayo magaalada Nairobi